कांग्रेस बिरुद्ध प्रतिस्पर्धा कम्युनिष्टको : शंकर पोखरेल |::Pathivara News
कांग्रेस बिरुद्ध प्रतिस्पर्धा कम्युनिष्टको : शंकर पोखरेल |
स्थायी कमिटी सदस्य शंकर पोख्रेल नेकपा एमालेभित्र वैचारिक नेता मानिन्छन्। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका निकटका नेता पोखरेल सामाजिक सञ्जालमार्फत व्यक्त विचार र सार्वजनिक कार्यक्रमको अभिव्यक्तिबाट बेलाबेलामा चर्चामा आइरहन्छन्। हालै बाम गठबन्धन भएपछि पनि उनले त्यसको विपक्षमा प्रतिक्रिया दिएको भनी सामाजिक सञ्जालमा चर्चा भयो। उनले आफू विपक्षमा नरहेको भनी स्पष्टीकरण नै दिनुपर्‍यो। यसै सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर थाहाखबरका लागि देविका घर्ती मगर र जयसिंह महराले पोख्रेलसँग गरेको कुराकानी : प्रदेश र प्रतिनिधि सभा चुनाव नजिकिएपछि नेकपा एमालेले माओवादी केन्द्र लगायतका दलसँग गठबन्धन गरेको छ। सँगै विभिन्न दलका नेता र व्यक्तिहरुलाई पनि पार्टी प्रवेश गराइरहेको छ। यसमा तपाई पनि निकै सक्रिय देखिनुभयो नि? निर्वाचन नजिकिएका कारण हामी चुनावी तालमेलकै विषयमा बढी केन्द्रित छौं। एमाले, माओवादी केन्द्र र नयाँ शक्ति नेपालसँग चुनावी तालमेल गर्ने र पार्टी एकताका लागि पहल गर्ने भनेर ६ बुँदे सहमति भइसकेको छ।
त्यो कुरालाई व्यवहारिक रुपमा कसरी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा छलफल चलिराखेको छ। अब एउटै चुनावी घोषणापत्र तयार गरेर जाने सन्दर्भमा हामी केन्द्रित भएका छौं। अर्कोतर्फ, केही राजनीतिक व्यक्तित्वहरु, स्वतन्त्र तथा आफ्नो छुट्टै वैचारिक समूह बनाएर बसेका समूहहरुबीचमा सूर्य चिन्ह लिएर चुनावमा जाने विषयमा पनि सहमति भएको छ। अधिकारको लडाईं हुँदाखेरि जति पार्टी भए पनि खासै फरक पर्दैनथ्यो। सडकमा नारा जुलुस लगाउनका लागि धेरै नेता, धेरै कार्यकर्ता भए पुग्थ्यो। जब राजनीतिक स्थायित्व र समृद्धिको प्रश्न अगाडि आउँछ, त्यतिबेला धेरै राजनीतिक दलहरु उपयुक्त हुदैनन्। दलहरु धेरै हुनु भनेको राजनीतिक द्वन्द्वको विस्तारमात्र हो। त्यसका लागि त स्वभाविक रुपमा पार्टी प्रवेश एउटा माध्यम हो भने ध्रुवीकरण अर्को माध्यम। बाम गठबन्धन र पार्टी एकतासम्मको कुरा भएपछि एमाले र माओवादी केन्द्रका कतिपय नेताहरु खुसी देखिएका छैनन्। तपाईंले सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त गर्नुभएको विचारमा पनि त्यस्तो देखिन्छ।
के यो गठबन्धनलाई सहज रुपमा स्वीकार गर्न नसक्नुभएको हो?
त्यो पूर्णत गलत कुरा हो। (मेरो सन्दर्भमा) गलत नियतका आधारमा समाचार बनाइएको छ। यस गठबन्धनबाट म खुसी मात्र होइन, यसलाई सफल पार्ने मिसनमा छु। पार्टीको घोषित नीतिका आधारमा हामीले चुनावी एकता र तालमेल गरेको हो। यद्यपी म पूर्व निर्धारित कार्यक्रम र दसैंको अवसरमा जिल्ला गएको बेला यहाँ प्रक्रियाहरु अगाडि बढे। त्यसमा मेरो अनुपस्थिति देखेपछि गलत ढंगले प्रयोग गर्न चाहने मान्छेहरुका लागि अवसर मिल्यो। जबकी म दाङमै पनि यो विषयको विशेष चर्चा परिचर्चा कार्यक्रममा सामेल थिएँ। त्यहाँ मैले बोलेका कुरा भिडियो लाइभ रहेछ, अहिले मैले त्यसलाई सार्वजनिक गरिदिएको छु। त्यस अर्थमा हाम्रा मिडिया कस्ता छन् भन्ने कुराहरु मान्छेले बुझ्न पाउँछन्। मैले बोलेका कुरा के हो र त्यसका बारेमा टिप्पणी गर्ने मान्छेहरुले कसरी टिप्पणी गरे भन्ने कुरा प्रत्यक्ष बुझ्ने मौका त्यसैबाट प्राप्त हुन्छ।
गठबन्धनले दुवैलाई लाभ नहुने हो भने त प्रक्रिया अगाडि बढ्दै बढ्दैन। एउटाको लाभको लागि अर्कोले एकता गर्छ भन्ने कुरा हुँदै हुँदैन। नेकपा एमालेले पनि यो एकता प्रक्रिया र चुनावी तालमेलबाट लाभ देखेको छ। माओवादी पक्षले पनि लाभ देखेको छ। त्यही भएर प्रक्रिया अघि बढेको हो। प्रमुख नेताहरुबीचको छलफलको चरणमा त एउटै चिन्ह लिएर जाने सहमति भएकै हो। पछि माओवादी केन्द्रका साथीहरुले प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धतिमा आफ्नो चुनाव चिह्नमा उम्मेदवार नहुँदाखेरि समानुपातिक पद्धतिमा गाह्रो भयो भन्ने कुरा गर्नुभयो। यद्यपी अहिले पनि एउटै चिन्हमा जान सकिन्छ। एउटै चिन्हमा जाँदाखेरि मतदाताले सहजरुपमा छनोट गर्ने अवस्था रहन्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ। स्वभाविक रुपमा माओवादी केन्द्र तयार भइदिए हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो चाहना छ। तर यही कारणले एकता प्रक्रियामा समस्या हुँदैन।
मैले हिजोमात्रै प्रचण्डजीको एउटा अभिव्यक्ति सुनेको थिएँ। यो एकता प्रयास चाहिँ माओवादी केन्द्रको विघटन हो, पुरानो विघटन नभइकन नयाँ बन्दैन भन्नेखालको कुरा गर्नुभयो। त्यसैले माओवादीको लिडरसीपले पनि सहमतिप्रति आफ्नो प्रतिवद्धता जाहेर गरिराखेको छ। माओवादीले सशस्त्र द्वन्द्वबाट आएको र्‍याङ्क एण्ड फाइल (नेताहरुको क्रम) को कुरा गरेको छ। त्यसमा नेतृत्वले के भन्छ भन्नेले धेरै कुरा तय हुन्छन्। नेकपा एमाले डेमोक्रेटिक प्रोसेस (निर्वाचन) बाट आउँछ। माओवादी त एकप्रकारले भन्ने हो भने युद्धकालीन अभ्यासबाट गुज्रेको पार्टी हो। त्यहाँ नेतृत्वले जे भन्छ कार्यकर्ताले सहज रुपमा ग्रहण गर्ने स्थिति छ। त्यसअर्थमा यो ठूलो समस्याको विषय होइन। कम्युनिकेसनको ग्याप (छलफलको कमी) ले कतिपयमा अस्पष्टता, अन्यौलता रह्यो होला विगतमा तर विस्तारै त्यो विषय सल्टिदै गएको छ।
पार्टी एकतासम्म जाँदा एमालेलाई माओवादीको जनयुद्ध र उसको वैचारिक धरातल माओवाद स्वीकार्न कति सहज होला? एकजना रुसी दार्शनिकको भनाइ म बारम्बार सम्झिन्छु। उनले भनेका थिए ‘इतिहासले कसैलाई सिक्न बाध्य गर्दैन, जसले इतिहासलाई सिक्दैन त्यसले सजाय पाउँछ।’ इतिहास हेक्का राख्ने विषय हो, भारी बोक्ने विषय होइन। भविष्य कसरी बनाउने भन्ने प्रश्नमा जब सहमति हुन्छ इतिहासका प्रश्नहरुमा धेरै अल्मलिरहन जरुरी हुदैन। हिजोको राजनीतिक कार्यदिशाका सन्दर्भमा माओवादी केन्द्रका आफ्ना मान्यता थिए, नेकपा एमालेका आफ्ना मान्यता थिए र ती दुईवटा पार्टी थिए। दुई वटा पार्टीको अस्तित्वमा आधारित भएर एकताको औचित्य पुष्टि गर्ने कुरामा केन्द्रित हुने कि एउटा पार्टी निर्माणका आधारहरुका सहमति कायम गर्न कोशिस गर्ने? एउटा पार्टी निर्माण गर्ने आधारहरुको खोजी प्राथमिक विषय हो भन्ने मलाइ लाग्छ। नेपालको राजनीतिमा हामी विगतका प्रश्नहरुमा ज्यादा अल्झिने गरेका छौं। म के ठान्छु भने, विगतका प्रश्नहरुमा होइन आगतका प्रश्नहरु, अब कसरी जाने भन्ने प्रश्नहरुमा सहमति कायम गर्ने हो भने यात्रा सहज हुन्छ।